ချောကလက်ဖြည့်နှင့် Almond ကွတ်ကီးများ Bezzia
မာရီယာ vazquez | 07/09/2021 10:00 | အချိုပွဲ
ဒါတွေကိုဘယ်သူကမှမစမ်းချင်ဘူးလို့ဘယ်သူထင်လဲ ချောကလက်အဆာနှင့်အတူ almond ကွတ်ကီးများ? သူတို့၏ရုပ်ပုံလွှာကိုမယူလိုက်ပါနှင့်၊ သူတို့၏ရိုးရှင်းမှုသည်နံနက်စာ (သို့) သရေစာ (သို့) ကော်ဖီတစ်ခွက်၌နှစ်မြှုပ်ခြင်း၏ပျော်ရွှင်မှုနှင့်မကိုက်ညီပါ။ အဖော်မပါဘဲလုပ်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်။
ဤချောကလက်များသည်ဗာဒံကွတ်ကီးများဖြစ်သည် သူတို့ကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ်။ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်မကြောက်ပါနဲ့။ ၎င်းသည်မတူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုရောနှောပြီးအလယ်၌ကွတ်ကီးများနှင့်ချောကလက်အရောကိုရရန်မုန့်စိမ်းကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်သကဲ့သို့လွယ်ကူသည်။
၎င်းတို့ကိုပြင်ဆင်ရန်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်သင်မိနစ် ၃၀ ထက်ပိုကြာလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ အိမ်ကကလေးတွေကမင်းကိုကူညီနိုင်တယ်မရ။ အများစုသည်သူတို့၏လက်များညစ်ပတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ပြီးဤအရာများတွင်ကွတ်ကီးများကိုပုံဖော်ရန်လိုအပ်သည်။ မင်းအဲဒါတွေကိုလုပ်ရဲလား။ သင်ဗာဒံကွတ်ကီးများကိုကြိုက်လျှင်ဤအရာများကိုလည်းစမ်းကြည့်ပါ apricot ယိုနှင့်အတူ.
၁၀၀ ဂရမ်။ oatmeal တပြင်လုံးကို
၅၀ ဂရမ်။ ဗာဒံမုန့်
၆၀ ဂရမ် ပျားရည်အစိမ်း
ဓာတုတဆေး၏3ဂရမ်
မီးဖိုကို ၁၈၀ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်အပူပေးထားပါ တက်နှင့်တက်အပူအတူ။
အခြားပန်းကန်လုံးထဲမှာ စိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများကိုမွှေပါကြက်ဥ၊ ပျားရည်၊ သံလွင်ဆီနှင့်ဗာဒံမုန့်
ထိုအခါ ဓာတုတဆေးကိုထည့်သွင်းသည် ဤစိုစွတ်သောပါဝင်ပစ္စည်းများတွင် ထို့နောက်မုန့်ညက်တစ်ခုရသည်အထိမွှေထားသောသန့်စင်ထားသောဂျုံမှုန့် (စားပွဲဇွန်းကိုထည့်ပါ) ကိုထည့်ပါ။
မုန့်စိမ်း၏ ၁/၃ ကိုအခြားပန်းကန်တစ်ခုသို့ပြောင်းပါ ၎င်းတွင်ကိုကိုးကိုပေါင်းထည့်ပါ။
ကျန်ပန်းကန်လုံးတွင်မုန့်စိမ်း၏ကျန် ၂/၃ နှင့်အတူသီးသန့်မုန့်ညက်ဇွန်းကိုထည့်ပြီးရောမွှေပါ။
ထို့နောက် မုန့်စိမ်းတစ်ခုစီကိုဘောလုံး ၁၄ လုံးခွဲပါ။
ကွတ်ကီးများကိုစုစည်းပါမရ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့၊ ဗာဒံသီးမှုန့်တစ်ဆုပ်ကိုယူပြီးပြားအောင်လုပ်ပါ။ ဒါကိုကိုကိုးမှုန့်ဘောလုံးတစ်လုံးနဲ့ထုပ်ဖို့အဲဒါကိုသုံးပါ။
ထို့နောက်ဘောလုံးကိုတစ်လုံးထဲသို့ထည့်ပါ မုန့်ဖုတ်ဗန်းစီတန်း ၎င်းကိုအနည်းငယ်ချပ်ပါ။
ဘောလုံးအားလုံးပြီးသွားရင် မိနစ် ၂၀ ဖုတ်ရမည် သို့မဟုတ်သူတို့အညိုရောင်မှစတင်မှီတိုင်အောင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ချက်ပြုတ်နည်းများ » အချိုပွဲ » ချောကလက်ဖြည့်ထားသော Almond ကွတ်ကီးများ